Shirkada weyn ee dawooyinka sameysa Johnson & Johnson ayaa la ganaaxay $4.7 bilyan… – Hagaag.com
Shirkada weyn ee dawooyinka sameysa Johnson & Johnson ayaa la ganaaxay $4.7 bilyan…
Posted on 13 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxkamad Maraykan ah ayaa amar ku bixisay in Johnson & Johnson oo sameysa dawooyinka ay bixiyaan $ 4.7 bilyan magdhow u ah 22 haween oo la sheegay inuu ku sababay kansarka riximka ama ilmo galeenka kadib markey isticmaaleen boolbarada Talc oo ay soo saarto shirkada.
Xukunka oo ka soo baxay Maxkamada gobolka Missouri ayaa laga qaadan karaa racfaan, waxaa xukunka ku jira in shirkadu ay bixiso magdhow gaarayo $550 milyun, waxaa lagu daray ganaax ciqaabeed oo dhibaatada ay geysatay alaabtooda oo gaaraya $4.1 bilyan.
Go’aanka xukunka ayaa yimid waqti shirkadda weyn ee dawooyinka oo qayb ka noqotay muranka garsoorka ee 9,000 xaaladood, oo ay ku jiraan xaaladaha boolbarada loo isticmaaalo maqaarka jilicsan ee caruurta.
Johnson & Johnson ayaa muujisay in ayna ku qanacsaneyn xukunkaasi. Waxay sheegtay in ay isku diyaarineyso in ay racfaan ka qaadato xukunka lix todobaad kaddib markii ay ku soo oogeen dacwad tiro haween iyo qoysaskooda oo kansarka ilmo galeenka ku dhacay,kadib markey isticmaaleen powder-ka loo isticmaalo caruurta iyo alaabooyin ay soo saarto shirkada tobonaan sano ka hor.
Qareenka dadka dacwad ka gudbiyey shirkada ayaa sheegay in shirkada ay ogeyd in alaabooyinka ay soo saaraan ay ku jirto maada halis ah Asbestos tan iyo todobaatameeyadii qarnigii labaatanaad, laakin uguma digin khatarta dadka adeegsada alaabooyinkooda.